Dowladda Soomaaliya oo shaacisay xilliga ay iibineyso shatiyada shidaalka dalka – Hornafrik Media Network
By Liibaan Nuur	 Last updated Nov 6, 2019
Wasiirka Shidaalka iyo Kheyraadka dabiiciga ah ee Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa Reuters u sheegay in bisha 12aad sanadkan la shaacin doono xilliga ay Soomaaliya billaabeyso xaraashka xirmooyinka shidaalka dalka.
“Waxaan soo bandhigeynaa 15 xirmo” ayuu yiri wasiir Cabdirashiid oo ku sugan magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika, halkaas oo uu kaga qeyb-galayo shirka shidaalka iyo saliida Afrika.
Wasiir Cabdirashiid ayaa sidoo kale ku adkeystay in 15-ka xirmooyin ay aad uga fog yihiin xuduudda badda ee Soomaaliya ay la wadaagto Kenya, halkaasi oo uu ka taaganyahay muran dhinaca badda ah oo ka dhaxeeya labada dal.
“Soomaaliya waxaa horey loogu yaqiin burcad badeednimo, argagixiso, degenaansho la’aan, iyo wax kasta oo xun, balse dowladda federaalka ah ayaa iminka sameeneysa wax kasta oo ay awooddo si ay dalka ku xasiliso” ayuu yiri Wasiirka Cabdirashiid.
Isagoo sii hadlayay ayuu yiri, “Tobankii sano ee tagay ma jirin xitaa hal dhimasho oo ka dhalatay burcad badeednimo, sidaas darteed, xeebaha Soomaaliya waa amni mudan in la maal gashado”.
Wasiir Cabdirashiid ayaa sheegay in qorshuhu yahay in madaxweyne Farmaajo uu dhowaan saxiixo sharciga shidaalka, oo hadda horyaalla golaha Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya kana soo gurbay golaha shacabka.
Waxa uu sheegay in maal gelinta shidaalka iyo saliidda Soomaaliya ay abuuri karaan shaqooyin cusub, isla markaana looga hor tagi karo in dhallinyarada ay u weecdaan rabshadaha.
“Soomaaliya waxay haysataa qariirad ay raacdo kadib marka ay soo saarto saliidda, sidaas darteed ma jiri doono dhib ka dhasha kheyraadkeena” ayuu yiri wasiirka kheyraadka xukuumadda Soomaaliya.